नेपालमा शासक र शिक्षामा सकस
बिहिवार, असार १८, २०७७ १०:४४:२१ युनिकोड
विश्व शिक्षामा फट्को मारी राखेको २१ औं शताब्दीमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सोचको परिवर्तन हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट भाषणमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुको पछाडि सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्न खोजिएको त होइन ? भन्ने प्रश्नहरु पनि उब्जिन थालेका छन् । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरुपमा जिम्मेबारी लिनुपर्ने ठाउँमा निजीकरण गर्न खोजे जस्तो अनुभूति पनि देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिको नाममा ब्यापारिकरण गर्न खोजिए जस्तो पनि देखिन्छ । नेपालको शिक्षामा गुणस्तर नआउनुको पछाडि शैक्षिक व्यापारिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरुको कारण आज यो अवस्था आएको हो ।
नेपालको शिक्षामा प्राचिन समयलाई नियाल्ने हो भने, परम्परागत रुपमा चल्दै आएको सामाजिक मूल्य र मान्यताहरुमा आधारित भई एक पीढींबाट अर्को पीढींमा हस्तान्तरण हुँदै गरेको पाईन्छ । घरमा आमा, बुवाले दिने शिक्षा पछि ऋषिमुनीहरुले बालबालिकाहरुलाई दासत्वमा राखेर प्रदान गरिने वा गुरु आदेशात्मक शिक्षा प्रणालीले गर्दा बालबालिकाहरुले शिक्षा ग्रहण गर्ने अवसर पाए पनि हृदय खुलाएर शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था दिइएन । त्यति बेला गुरुका मुखारबृन्दबाट निस्केका बाणी बिद्यार्थीहरुलाई कन्ठाग्र पार्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । परम्परा देखि यो समाजबाट उब्जिएको नेपालको शिक्षा प्रणाली दासत्वको ब्यवहार हालसम्म खेपी रहेको छ । शिक्षामा त्यस बेला समाजका रीतिरिवाज, चालचलन, जीवन आर्दश, धार्मिक तथा सामाजिक मूल्यमान्यताका बिषयमा शिक्षा प्रदान गरिन्थ्यो । यो सकरात्मक पक्ष हो ।
रुसोको एउटा भनाई छ,मान्छेको जीवन सर्वत्र साङ्लोले बाधिएको छ । यही भनाईलाई चरितार्थ पार्ने काम त्यतिखेरको देखि हालसम्म कायमै छ । नेपालमा बि.सं. १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापना भएपछि राणाहरुले केही हदसम्म जनताको छोराछोरीले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन कि भन्ने आशा त जनतामा थियो होला तर राणा महाराजहरुले आफ्नो भाइभारदवार बाहेक अरुलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिएनन् । राणाकालका प्रधानमन्त्री जंग बहादुर, देवशमशेर, चन्द्रशमशेर र पदमशमशेरले बिद्यालय खोल्ने, पाठशाला खोल्ने काम नगरेका होइन । नेपालमा थुप्रै पाठशालाहरु खोलिए तर जनताले पढ्ने लेख्ने वातावरण पाएनन् । राणाहरुवाट जहाँनीया क्रुर शासनको सामना गरिरहे । बि.सं. १९५७ मा देवशमशेरले उपत्यकामा ५७ ओटा र उपत्यका बाहिर १०० ओटा भाषा पाठशाला खोलेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ तर उनलाई जनतामुखी भयो भनी पदच्यूत गरियो । त्यसै समयमा जयपृथ्वी बहादुर सिंहले पनि अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक निकाली जनताका छोराछोरीलाई ज्ञान दिने सकरात्मक वातावरण सिर्जना गरे । ‘एउटा मान्छे कति बोलोस अनि एउटा दाउरो कति बलोस’ भने जस्तै भयो त्यस समयमा । यसबेला पनि शासक कै दबदबाले शिक्षामा असर पुगेको देखिन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा शिक्षाको नाममा बि.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसंगै केही परिर्वतन नीतिगतरुपमा भएको पाइन्छ । यस पछि बिभिन्न आयोगका प्रतिबेदन, शिक्षा ऐन, नियमावली, बिद्यालय सुधार कार्यक्रम जस्ता नीतिगत कुरा नआएका होइन तर यो संगै शिक्षा ब्यापारीकरणको थालनी भयो यस्ता कार्यक्रम शैक्षिक शासक बाट सञ्चालिन हुँदै आउँदा शिक्षामा ब्यापारिकरण र राजनीतिकरणको हाबी भयो । नेपालमा शिक्षकले कहिले स्वतन्त्र भएर शिक्षा प्रदान गर्न पाएनन् । कहिले राजनीतिका नाममा कहिले ब्यापरिकरणका नाममा । त्यसैले गर्दा शिक्षामा ब्यापार गर्नेहरुको चलखेल चल्न थाल्यो । नेपालको शिक्षा ऐन, नियमावली आएपछि निजी तथा सामुदायिक बिद्यालय बिषेश गरी दुई धारमा बिभाजन जस्तो हुन थाल्यो । यसले शिक्षाको गुणस्तर कायम गराउनुको सट्टा शैक्षिक ब्यापारीहको उदय गराउने काममा बढी प्रसय दिइयो । जब शैशिक ब्यापारीलाई टेवा दिने ब्यक्तिहरुको उदय संगै सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने वातावरण सिर्जना गरियो । अहिले साममुदायिक बिद्यालय भन्दा निजी विद्यालयले गुणस्तर कायम गरेको बजारमा हल्ला रहेको छ । तर वास्तबिकता फरक जस्तो लाग्छ । निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षामा योगदान गरेका छन् । यसमा दुई मत छैन तर यो होइन कि सामुदायिक विद्यालय सुतेर निजीले छलाङ मारेको अवस्था भने पक्कै होइन । यसका थुप्रै आधारहरु छन् । नेपालमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका ८० प्रतिशत र निजिमा २० प्रतिशत रहेका छन् त्यस बाट पनि आँकलन गर्न सकिन्छ । सामुदायिक र निजि विद्यालयको योगदान कसको बढी भन्ने स्पस्ष्ट हुन्छ । नेपालको हरेक क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी नेपाली बजारमा बिकेका छन् । जस्तै निजामती, शिक्षक, सुरक्षा सेवा लगायतका थुप्रै सेवामा रहेका छन् । अनि बजारमा बिक्ने जनशक्ति सामुदायिक विद्यालयले उत्पादन गर्ने त्यसको जस चाही ब्यापारिक संस्थाले पाउने गरेका छन् । निजि विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति बिदेशका लागि केही हदसम्म उपयोग भए तुलनात्मक हिसावमा विद्यालयमा उत्पादित जनशक्ति बजारमा बिकेको छ यसो हुँदा हुँदै पनि शैक्षिक ब्यापार गर्ने मनसायले सामुदायिक विद्यालयलाई बाहिरी हल्लामा खस्केको देखाईएको छ अनि खस्काउन खोजिएको छ । यसका पछाडि शैक्षिक ब्यापारीहरुले कुम्ल्याएको खेल मात्र हो । नेपालमा शिक्षकले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर बिगारेको दोष पनि लगाउने गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत केहि शिक्षक कर्मचारीहरुले शैक्षिक गुणस्तर कमजोर गराउने गरेका छन् तर सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छैनन् भन्ने कुरा मिथ्या नै हो । यसमा पनि तिनै राज्य सञ्चालकहरुले शिक्षक भनाईलाई स्वतन्त्र रुपमा खोल्न नदिने शिक्षक भर्ना गर्नका लागि लिइएका आयोगका परीक्षालाई दशौं बर्षपछि प्रकाशित गरी आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने परिपाटीको सिर्जना गर्ने, शिक्षकको पेशागत उन्नति,वढुवा,सरुवा तथा पुरस्कार र दण्डको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुनुले गर्दा अझै गुणस्तरमा असर पुगेको छ । अर्को कुरा पेशागत हकहितको लागि संघ संगठन खोल्न उद्धत गराई राजनीतिमा संलग्न गराउने परिपाटीको अन्त गर्न सकिएको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरले अझै छलाङ मार्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । पेशागत हकहितका लागि संगठन खोल्नै नहुने भन्ने पनि होइन एउटा साझा संगठन बनाउन सकिन्छ । तर राज्यले शिक्षकको पेशागत विकासको पूर्णरुपमा ग्यारेन्टी लिएमा यसको आवश्यकता नै देखिदैन । शैक्षिक व्यापार गर्नको लागि विभिन्न जालझेलको रचना गरेका कारण केही विद्यालयमा गुणस्तर खस्केको भने स्वीकार्नै पर्छ तर सबैको होइन । देशभरी राम्रो गर्ने विद्यालय र शिक्षक पनि छन् । त्यसको लेखाजोखा कहिले गरिदैन । खाली एउटा जिल्लामा पाँच प्रतिशत विद्यालयले गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा सबैलाई एउटै नजरमा हेर्ने परिपाटी सिर्जना गरिएको हो ।
नेपालमा राज्य सञ्चालकहरु पनि तिनै शैक्षिक व्यापारीहरुका पछाडि लागि राज्यको लगानी डुबाउने काममा प्रशय दिईराखेका छन् । दोष शिक्षक अनि सामुदायिक विद्यालयलाई दिइ राखेको अवस्था देखिन्छ । त्यस कारण शैक्षिक व्यापारीहरुले शिक्षामा व्यापार गर्ने ठुलो मौका पाएका हुन सक्छन् । सबै सामुदायिक विद्यालयलाई एउटै तुलामा जोखेर हेर्नु पनि त हुदैन । बार्षिक रुपमा राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई छुट्याइ न्यायिक मूल्याङ्कनद्वारा प्रोत्साहन तथा दण्डको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अनि अर्काे आरोप सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी हो । यस प्रसंगमा सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी छ भने निजी विद्यालयमा अभिभावक स्वयम्को तर कहिले पनि निजी विद्यालयको लेखाजोखा गरिदैन । अनि निजी विद्यालयले नेपाली बजारमा बिकाउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन किन गर्न नसकेको ? प्रश्न कहिलै गरिदैन । त्यसैले सामुदायिक विद्यालय आफैमा सक्षम छन् । सामुदायिक र निजी विद्यालयको परीक्षा प्रणालीमा एक पटक निहाल्न पनि जरुरत छ । त्यस भित्रका खोटहरु पनि धेरै छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई कालो चस्माले नहेरिएको खण्डमा नेपालको शैक्षिक गुणस्तर कायम गराउन सक्षम रहेकै देखिन्छ । विद्यालयलाई व्यापारीकरण र राजनीतिकरण नगरेको खण्डमा अझैे राम्रो गर्न सक्ने कुरामा कुनै शंका गर्न सकिदैन । राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई सकारात्मक सोचकासाथ अगाडि बढाउदै निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्न सकेको खण्डमा गुणस्तर सुधार भई विश्व बजारमा विक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन अवश्य गर्न सकिने छ ।
शिक्षाको गुणस्तरमा विद्यालय नभएर दोष राज्यले वहन गर्न सक्नु पर्छ । चाहे त्यो निजी विद्यालय होस् या सामुदायिक राज्यको नियन्त्रणमा रहेर शिक्षा प्रदान गर्ने तथा शिक्षालाई व्यापारको रुपमा नलिई सेवाको रुपमा लिने हो भने शैक्षिक गुणस्तर आफै सुध्रिन गई देश विकासमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । जबसम्म शिक्षा र विद्यालयलाई विभाजन गरी शैक्षिक व्यापार गर्ने परिपाटीको अन्त्य हँुदैन तबसम्म शैक्षिक गुणस्तरको आशा गर्नु बेकारमा समय खर्चनु हो ।
चन्दननाथ न.पा.३, जुम्ला
हालः भगवति सेवा प्रा. वि. तनहुँ प्रधानाध्यापक ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, जेठ २३, २०७७, ०१:३१:००